Khilaafyada taxanaha ah ee dhawaanahan ma ka dhalan karaan codka kalsoonida BHA? | 1xbet
Rust waxaa iimayl u diray qof tartamaya oo soo jeediyay in codka kalsoonida laga yaabo in loo yeero toddobaadyada soo socda. “Aniguna sidoo kale waan maqlay,” ayuu Rust ku qoray jawaab uu arkay Mas’uulka, wuxuuna raaciyay digniin. Waxay noqon doontaa is-baabi’in haddii mooshinka ‘kalsooni-darro’ la soo jeediyay (sidaan maanta maqlay) baabi’inta BHA iyo is-xakamaynta xirfadleyda orodka. Dawladdu waxay soo faragalin doontaa isboortigeena haddii taasi dhacdo oo isboortigu faraha ka baxo. ”
Mid ka mid ah tababbarayaasha ayaa si gaar ah u xaqiijiyay in codka kalsoonida lagala hadlayo heerka ugu sarreeya ee lacagta abaalmarinta toddobaadyadii la soo dhaafay .Mid kale ayaa yiri: “Ma aanan maqlin wax ku saabsan cod, laakiin waxaan lahaa fikirkaas, inaan mid yeelano. Tababaraha waxaa loola jeedaa “kala goynta asaasiga ah” ee u dhaxaysa xeer -ilaaliyaha iyo kuwa uu maamulo, oo ah qayb si gaar ah u soo ifbaxday wixii ka dambeeyay Talaadadii Hunt National Hunt Chase. Waxay ahayd guddi wakiillo ah oo qaatay go’aanka muranka dhaliyay ee lagu joojiyay Declan Lavery si loogu sii wado Jerrysback oo daalay laakiin waxay ahayd BHA, loo -shaqeeyaha wakiillada, taas oo jawaabta xanaaqa badankeed la faray. iimaylka xulashada tifaftireyaasha.
Si kale haddii loo dhigo, cabashooyinku ma ahayn, sida laga yaabo inay filayeen, ilaa afar wakiil oo isticmaalaya muran muran leh oo ah xeer macquul ah iyagoo cadaadis saaran maalin mashquul ah.Taa bedelkeeda, waxay noqdeen qayladoodii ugu dambaysay ee ka soo horjeedda fardooleyda oo ku saabsan hay’ad xukun oo ay u arkeen inay tahay mid culus, oo aan ka jawaabin oo aan la xiriirin tabashadooda iyo xaqiiqda noloshooda shaqo.
Wararka Tartanka sanadkaan waxaa hareeyay sheekooyin muujinaya in saraakiishu hal bog ku jiraan halka fardooleydu ay saaran yihiin bog kale. BHA waxay ahayd inay dib u dhigto xeer cusub oo u baahan dhammaan orodyahannada inay xiraan kabaha gadaal markii, markii ugu dambeysay, ay noqotay mid aan aad looga jeclayn tababarayaasha, oo badankood aan lagala tashan.Qaar ka mid ah waligood ma aqbalin BHA ee loo baahan yahay in la xiro orodka inta lagu jiro xiisadda hargabka, halka qaar kalena ay ka soo horjeedaan xeerarka tallaalka ee kor loo qaaday markii tartanka la soo celiyay, xeerarka ayaa la soo saaray habeen dambe, saacado uun ka dib markii wakiilka tababarayaasha loo sheegay. Milkiilayaasha Sawirka Al Boum ee dahabka ku jira qalad | Chris Cook Akhri wax dheeraad ah
Go’aamada kale ee wax -ku -oolka ah waxay ahaayeen kuwo daandaansi ah, gaar ahaan ganaaxa tababaraha Henry Oliver markii uu gacmaha ruxayay si uu u dhiirrigeliyo faraskiisa hore bilowga. Ciyaar-yaqaanka Charlie Bennett wuxuu si guul leh uga horyimid mamnuucid fuulitaan taxaddar la’aan ah oo 12 maalmood ah taasoo ururkiisa ganacsigu ku tilmaamay “si khaldan u khaldan”.Qaar waxay isku xiraan murannada noocaan ah qaabkii wakiilnimo ee cusub oo BHA soo bandhigtay bishii Ogosto. “Cidina ma doonayn tan, maareeyaha mooyee,” ayuu yidhi mid ka mid ah tababarayaashu. “Kani wuxuu ahaa ololihii Nick.”
Dhanka kale, warqad ka timid tababaraha Henry Daly ee Racing Post ee Axadda ayaa ku dooday in tababarayaashu ay BHA ka xakameeyaan arrimaha la xiriira daryeelka faraska. “Waxaa la gaaray waqtigii aan dhammaanteen nolosheena iyo xirfadeena ku qaadan lahayn gacmaheena halkii aan u horseedi lahayn sidii baraar la gowracayo,” ayuu qoray. wuxuu si cad u sheegay in xanaaqiisa si weyn loola wadaago tartanka. “Waad ka wada hadli kartaa in cadhadu xaq tahay,” ayuu yiri mid ka mid ah dadka BHA, “laakiin hubaal waa halkaas.”Laakiin way u furan tahay in la isweydiiyo haddii uu leeyahay xirfadihii diblomaasiyadeed ee lagama maarmaanka u ahaa inuu wax hagaajiyo, marka la eego inuu ku guulaystay inuu ka xanaajiyo tababarayaasha Irishka iyo saxafiyiinta Times isaga oo la kaashanaya qaar ka mid ah hawada. Wuxuu beeniyay inuu ku eedaynayo Xiriirka Tababarayaasha Qaranka fashilaad ku yimid wadatashiyadii hore, laakiin markii dambe wuxuu yiri: “Waxaan filaynaa markaan aadno NTF, inay tashadaan.”
“Ma nihin urur aan loo dhawaan karin,” Rust ayaa yidhi. “Annagu ma nihin Stasi.” Laakiin wuxuu kaloo ka cawday luqadda ay adeegsadaan dadka naqdiya BHA, isagoo leh: “Ciyaaraha kale waxaa loo keeni doonaa sumcad -darro.” Waxay ahayd wareysi dagaal, xanaaq badan, oo yareyneysa rajada nabadeed ee ka bilaabmaysa tartanka waqti dhow. Tilmaamaha Degdegga ah Tilmaamaha tartanka ee Isniinta 18ka Maarso Muuji Qari